Maintirano : Trano miisa 12 nodoran’ny dahalo -
AccueilSongandinaMaintirano : Trano miisa 12 nodoran’ny dahalo
Trano hazo miisa 12 ao amin’ny fokontany Mahasoa, kaominin’Andabotoka, distrikan’i Maintirano no nodoran’ny dahalo miisa 25 nitondra basim-borona 03, rehefa avy norobain’izy ireo ny tolakandron’ny alarobia 30 mey lasa teo. Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana, dia tamin’ny fotoana niasan’ireo mponina tany an-tanimboly no nitontonan’ireo olon-dratsy ireo tao an-tanàna. Nanaram-po tamin’ny asa ratsin’ireto farany tamin’izany ka nofaohan’izy ireo avokoa ny entana rehetra toa ny fitaovan-dakozia, ny fitafiana sy ny maro isan-karazany tao amin’ireo trano miisa 12 ireo. Tsy nionona tamin’izay ireo dahalo fa mbola nodoran’izy ireo indray ireo tranon’olona avy eo, talohan’ny nandosirany. Vokatr’izany, dia olona manodidina ny 30 no tsy manan-kialofana sy very fananana. Misokatra ny fanadihadiana, ary efa mandeha ny fikarohana ataon’ny borigady ao Maintirano amin’izao fotoana izao.